Kugadzira Chakagadzirwa Hymen
Organic inokurumidza mvura-yakanyunguduka cellulose komputa yakanyatso gadzirirwa kushandiswa mumuviri wemunhu. Zvese zvinoshandiswa zvinosanganisa uye zvisina kutsoropodza. Zvigadzirwa zvedu zvinotomboita halal-inoenderana sezvo pasina chinhu chinogadzirwa chigadzirwa chenguruve kana gelatin
Batch rimwe nerimwe yechigadzirwa iri inogadzirwa murabhoritari yeGerman ye microbiology. Isu hatinyanye kuburitsa zvigadzirwa kuti tizvichengete isu nguva dzese dzakazara. Ropa rekugadzira rakagadzirwa nehupenyu uye rakafanana chaizvo neropa rekutanga.
Iyi granulate inoiswa pasi pemamiriro akachena kune yakambove yakatemwa membrane uye yakavharwa neyechipiri, yunifomu membrane.
Izvi zvinoiswa muhombodo yematehwe kuchengetedza mubatanidzwa.
Unofanirwa kuisa zvigadzirwa izvi zvakanatswa pasi pemamiriro akachena kune yakambochekwa-membrane iyo yakavharwa neyechipiri yunifomu membrane.
Kuchengetedza chigadzirwa chedu tinozviisa muhomwe yematehwe uye bhegi rega rinobva rakarongedzwa rega rega muhomwe yealuminium kuchengetedza kusangana kwaro nemhepo nemvura. Zvese zvakarongedzwa zvakachengeteka uye zvinehutsanana. Kunyangwe iwo iwo mavara pigments asingatarise mutsvuku usati washandiswa hapana chikonzero chekufunganya. Poda paunongobata hunyoro hunobva hwashanduka kuita ropa dzvuku. Pakuvhura, chigadzirwa chinosangana nehunyoro uye cellulose inonyungudika zvachose uye inodiridza iyo granulate.